WARBIXIN: Claudio Ranieri oo ilmeeyay, dabaaldaga ciyaartoyda Leicester Muxuu ahaa indhoolihii xalay lasocday macalinka reer Italia – Waxwalba oo xalay ka dhacay King Power Stadium +SAWIRO. | Haqabtire News
WARBIXIN: Claudio Ranieri oo ilmeeyay, dabaaldaga ciyaartoyda Leicester Muxuu ahaa indhoolihii xalay lasocday macalinka reer Italia – Waxwalba oo xalay ka dhacay King Power Stadium +SAWIRO.
eicester City ayaa u dabaal daaftay horyaalka Premier League markii ugu horeysay taariikhdooda 132-sano oo ay dhisan yihiin markii Everton maalin isbiirit badan ay ku garaaceen King Power Stadium.
Tani waxa ay ahayd maalintii ugu xusuusta badneyd Dawacooyinku oo ku guuleysatay Premier League isniintii lasoo dhafay markii Tottenham ay ku guuldareysatay inay garaacdo Chelsea – iyadoo hore usii dabaal dagtay, inta lagu guda jiray todobadakii lasoo dhaafay.
Waxay aheyd maalinta ugu weyn taariikhda kooxda ay dhiosan tahay iyadoo kumaan taageerayaal ah ay isugu soo baxeen magaalada.
Leicester ayaa soo gabagabeesay sheekada adduunka riyada uu u arkayay, markii kabtanka kooxda Wes Morgan iyo tababare Claudio Ranieri ay si wadajir ah u kor ugu qaadeen koobka Premier League.
kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa 12-ka bilood ka hors afar u aheyd in ay dib ugu dhacdo Horyaalka heerka labbaad ee Champiosn Ship lakiin si deg deg ah ayay lama filaan ugu qaaday Horyaalkii ugu horeeyay.
waxay guul 3-1 ah ka gaartay Everton – laakiin tani waxay ahayd in ka badan ciyaar kubadda cagta, waxay ahayd damaashaad ay ku timid illin farxad iyo dareen sare madaama taageerayaasha quustay qaraw ay ku qaadeen Horyaalkaan.
Ninka caanka ak ah talyaaniga ee music iyo heesaaga ah ee Andrea Bocelli oo, indhaha la’aa ah tan iyo 12 jirkiisii ayaa , lasocday wadiniga Ranieri 30 daqiiqo ka hor dhamaadkii ciyaratii King Power Stadium ayaana la arkay.
dabadeedna daqiiqado soo jiidasho leh ayuu garoonka ka sameeyay Andrea Bocelli, Ranieri ayaana eegay dhankiisa isagoo ku dhawaad kusigtay inuu ilmeeyo,
Andrea Bocelli ayaa lakiin jawiga bedelay isagoo ka dhax qarxay taageerayaasha oo madadaalo uu u bilaabay markasoo garoonka sacab iyo koox koox uu ukala baxay.
“Waxa ay aheyd wax la yaab leh, Waxaan isku dayay in xoogaa dareen ah sameeyo, waan ku noolaan karaan waqtiga oo dhan halka ugu wanagsan sida Andrea Bocelli,” Ayuu yiri Ranieri, kasoo kala qeyb gali doono kooxdiisa dabaaldega guusha Horyaalka 16 May.
Kani waxa uu ahaa horyaalka aan caadi aheyn iyo daqiiqado aan ku xasuusan doono Ranieri ayuu yiri Bocelli oo istaagay muujiyayna dabaal dag aan caadi aheyn.
Ranieri ayaa iyo daafaca Dawacooyinku Christian Fuchs ayaa wada ilmeeyay markii la waraystay ka dib markii bandhig koobka uu dhamaaday waxaana ay ka tarjumeen dareenkooda guusha kooxeed.
“Waxaan ahay nin layab leh,” ayuu yiri. “Waxaa jira wax badan oo kamaradaha I tuseen markii aan qaylinayay, ‘maanta maya’ ka dibna waxaan idinku leeyahay Hambalyo ayuu yiri Tabaraha Guuleystay,
“Waxa ay noqon doontaa dabaal deg fiican, laakiin 10 jeer noloshayda ayaa farxad la ilen doonta.
“Waxaan hadda qabaa kaliya ciyarata sooscta inana badinaa, ka dibna waxaan aadi doonaa badda waxaan qadan doonaa nasasiino , ka dibna waxaan waxaan bilaabi doonaa diyaar garowga xilli ciyaareedka soo socda, Ranieri ayaa yiri.”
King Power Stadium ayaa buuxay sadex saac ka hor xiligii ciyaarta iyadoo taageerayaasha iskusoo diyariyeen dabaal daga kooxdooda.
Xisbiga horyaalka ku guuleystay ee Leicester ayaa bilowday garoonka garoonka in ay usoo dhadhacaan iyagoo sare u qaaday kabtan Morgan iyo tababarahooda.
Kumanaan taageerayaal ah ayaa ku hareereysmay garoonka kaliya uu ahaa Damaashaadka ay la qadanayeen kooxdooda Leicester oo si lama filaan ah sagaal bilood kadib markii ay ka badbadeen heerka Labaad ku guuleystay Horyaalka.
ciyaartoyda Leicester iyo, tababarahoodaburjiga badan ee Ranieri ayaa had iyo jeer garoonka marba dhinac farxad kala tagayay.
Waxa ay ahayd dhacada ugu weyn markii Ranieri uu soo hogaamiyay ninka heesaga araga la’a ee Bocelli oo uu keenay garoonka isagoo u xiray maaliyada Leicester ka hor inta aan la garain waqtigii nabad galyada.
Haleeyada koxdan iyo Enmgland u qaaday koobkii aduunka 1966 kabtankii hore ee Frank McLintock – kasoo laba jeer kula guuleystay Arsenal FA Cup 1971 – iyo sidoo kale Dave Gibson iyo Mike Stringfellow ayaa soo xaadiray dabaaldaga kooxdan ay sameysay.
Dawacooyinka ayaa kulankoodii xili ciyaareedkii hore waqtigaan oo kale ay ciyaareen waxa ay 2-0 kaga badiyeen Southampton iyagoo soo fariistay booska15-waxaana ay lahaayeen 37 dhibcood 36 kulan oo ay ciyaareen, labada gool Riyad Mahrez ayaa dhaliyay waqtigaas,
Haddaba Mahrez hadda waa xididga PFA ku guuleystay , Jamie Vardy waa Laacibka sanadka ee qorayaasha kubada cagta halka – Leicester ay 80 dhibcood heshay 37 kulan oo ay ciyaartay.